Version 0.5.5 – Taageerada Buddypress
June 18, 2010 by dalabyo 20 Comments
Miyaad xabadii uu XULANAYO aad weli for wordpress ah 3.0 sii daayo? Hadda oo aad samayn karto in raaxaystaan ​​xaqiiqada ah in plugin ugu dambeeyay Transposh for wordpress waxay bixisaa taageero for wordpress cusub, iyo sida gunno, taageero loogu talagalay buddypress. Tani waxay taageero for buddypress hadda ka dhigan tahay in umada bahawdey doorasho guud iyo jawaabay it by hadda noqon doono translatable.
Isbedelka More waxaa ka mid ah taageero dheeraad ah shuruudaha ay dhigay UI ee xurgufta ugu, marka tusaale ahaan qalabka jQuery waxaa loo isticmaalay qaar ka plugin ama mawduuc, hadda – waxaan kari waayeen inay u shaqeeyaan.
Like hore loo tan iyo a version cusub ee waaweyn ee wordpress soo baxay waa, waxa aan darasada taageero rasmi ah wordpress wayn 2.8 version, plugin in ay weli sii shaqayn, laakiin waxa aan doono in lagu baaro iyo u jecleystay for version in oo aanu ku talinaynaa in aad u cusboonaynta.
Sida had iyo jeer – waxaan rabnaa in aan aad maqasho soo baxay, waxa Tilmaamo aad rabto inaad? kaas oo kooxda ku guuleysan doontaa koobka adduunka? kaliya hoos u comments aad halkan.
Filed Under: Messages General Tagged Iyadoo: buddypress, yaryar, sii daayo, WordPress 3.0, plugin wordpress
Hambalyo. Waa in aad haysato qaar ka mid ah runtii isku hallayn kara tijaabiyeyaal beta oo ha kaa dhamaato alaabtiinnana on BuddyPress goobaha ay ku nool yihiin… 8^)
Haa, thanks for that 😉
Waxaad tahay ugu soo dhaweyn dabcan! Su'aal Quick: Ma jiraa hab kasta oo ka mid ah anada turjumaad ah ee macloomaadkii code sida in http://virtualcrowds.org/zh/ ?
Waxaan u badan tahay in la abuuro karo interface qaar ka mid ah oo u oggolaan doonaa in, laakiin mid ka yeelan doonaa inuu isbedel code si ay u taageeraan, Anigu taas ma gelin lahaa weli in mudnaan sare
Waxaan fahamsanahay. Its ah mid cajiib ah in, inkastoo ay u badan tahay in ay joojiyaan lahaa wax badan oo horumarinta web isticmaalaya Transposh. Marka aad wacdo. Waxaad heshay map wadada!
Waxa kale oo aan ogaaday waxa ay isku daydaa in ay u turjumaan URLs, taas oo ka dhigaysa macno lahayn, Dabcan. Waxay leeyihiin in ay sii joogaan sida uu yahay. Eeg waxa halkan dhacaya… http://virtualcrowds.org/zh/2010/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%9A%84Blogger/yoast-seoktoberfest-2010-looking-forward-to-it/. Waxaan u maleynayaa in badan oo ka mid ah goobaha aan daabacaan lahaa HTML / code PHP ama URLs oo aan la qaban baxay by this laakiin waxaan qiyaasi jiraan wax badan oo blogs in ay sameeyaan.
tani waa casriyayn weyn u transposh.
Waxaan su'aal ka qabto,waxaa turjumi bogga ku badbaaddeen sida post joogto ah?
maxaa yeelay, waxaan inta badan ka heli retranslate ee isku post.
Tarjumidda ku badbaaddeen, Waxaan hubiyaa aad site waxayna u muuqataa ok, waxaa retranslate kara haddii content uu is beddelay ama wax kale ka iisheen.
mahad.. i raaci doonaa update ee plugin this. Great plugin..
Maxaa plugin la yaab leh! Waan ku rakiban ku http://www.impacollective.org website I loogu tala galay oo ahaa run ahaantii la yaab! Orday galay waxaad snag ah! Marka lagu rakibay, plugin uu keeno aan diiwaan user cusub oo ay ku guuldareystaan! Waxaa tegi maayo baxsan shaashadda bilowga mana diri e-mails. Waxaan soo bandhiga this site ee shirka World Dance Alliance ee NYC in dadka ka soo adduunka oo toddobaadkan soo socda. Waxaan ordaya WPMU 3.0 iyo BP 1.2.5.2 ku saabsan 20 plugins. Kasta oo qof fursad jeclaan lahaa inay igu caawiyaan inaan ogaado colaadda? Waxaan jeclaan lahaa inaan ka mid habkaani soo bandhigidda.
P.S. Haddii aad i jeclaan lahaa in ay dib-u-soo dajiyo si aad u arki karto arinta, ama u baahan tahay wax, kaliya ii soo sheeg!
Ma noqon doontaa faraxsan in ay isku dayaan oo halkaas waxaad ugu caawiyaan, waa baadida saxda ah ee aad ku orday galay?
Marka plugin firfircoon yahay, badhanka hoose ee cusub ee bogga diiwaangelinta user isbedel. Haddii aan plugin ku rakiban, waxaa akhriyo “Sign Up Buuxi” iyo dadka isticmaala ay u riixi kartaa in ay ku talaabsato nidaamka diiwaan gelinta. Marka plugin firfircoon yahay, isbedel badhanka inay akhriyaan “Gudbi su'aal.” Marka user a ka dibna isku dayo in uu sii wado adigoo gujinaya batoonka, bogga qabowjiyaa iyo waxba dhicin… Calashaan plugin isku badalayaan button iyo misdirecting Waxaan qabaa…??? Waxaan soo nooleeyey plugin ee maalinta si aad u arki karaan “submit su'aal” isbeddel in tallaabo. Waad ku mahadsan tahay si aad ah u eegayaan this. Dadka ka soo adduunka oo dhan ayaa indhaha ku heysa at this brand site cusub! iyo plugin korkoodu dambi iyo colnimo wow!
Just updaate ah… Waxaan naafo dhan plugins marka laga reebo BP iyo transposh iyo arrin weli lahaa!
Thanks, Waxaan awooday in la eg cayayaanka ee aan deegaanka, kuu sheegi doona marka ay go'an.
Laga Helaa cayayaanka ee theme ka buddypress
Eeg meesha bannaan ee ka maqan dhexeeya nooca iyo magaca
line cusub waa in
Sidoo kale sheegay kheyraad: http://trac.buddypress.org/ticket/2516
Waxaa hadda ka shaqeeya! WAAD KU MAHADSAN! Waxaan boostada doonaa theinfoe on codsi buddypress taageerada waxaan ka yeellay. Waxay wax ka qaban karta in la hagaajiyo soo socda. Waxa kale oo aan ku dhejin doonaa a link si aad goobta ku mahadsan my page Waxaad! Ma leedahay link deeq u Waxaan u soo diri kartaa kaalmada qaar ka mid ah horumarka? Mar labaad, aad baad u mahadsan tahay!
Thanks Scott, waxay ii ahayd farxad inaan caawiyo,
fadlan la taageero horumarka say u ogaano arrimaha wax dheeraad ah aad la kulantid iyo fikrado laga yaabo in aad qabto!
Waxaan isku dayayaa in la helo si ay ugu taageerto labada Thai iyo English for my site aan macaash BuddyPress, Zanyiza. Tani waa shabakada dhisay dadka Akha qabiil of Northern Thailand ah. Waxaan rabnaa in aan awoodno in lagu qoro afka Akha ah, sidoo, kaas oo isticmaala characters Roman.
Si kastaba ha ahaatee, Anigu ma heli karo meesha aad gacanta xaalkaa qoraalka, sida turjumaad auto aanay mar walba sax ah (tusaale ahaan, waxa uu ku tarjumayaa ereyga “sheekeysto” galay erayga Thai ee “cat”!)
Waxaan arki in FAQs in “Luqada loo calaamadiyay editing u ogolaan doono turjumaan (qof kasta oo lagu calaamadeeyaa qaybta 'yaa turjumi karin') si ay kursiga igu soo buqatay shirkii ka. I.E. turjumi jeeg-box muuqan doona widget.” Si kastaba ha ahaatee – Ma arko meesha ay ku calaamadee luqad u tafatir meel kasta.
Waxaan ordaya WordPress ka 3.0.1 Daraasadii leh theme BuddyPress Scholar.
Waxaan la haatan ka shaqeeya xal af toddobaadyo ah… soo maray WPML, qTranslate iyo dhowr ka badan laakiin ka sii socda in Transposh dib. Fadlan caawin!
Waad ku mahadsan tahay in horay!
Su'aasha First, luqada loo calaamadiyay tafatir hayn doonta cagaaran, widget wuxuu muujin doonaa checkbox edit turjumidda, hab fudud oo ay tan u suurageliso waa in ay awood u turjumaad qarsoodi ah.
Su'aasha labaad, isagoo intaa ku daray Akha, waxaad u baahan doontaa in saxaa ah constants.php fayl si loo gaaro in